अमृतमय बधाई 'अमृतोत्सव'को ! | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७७ कार्तिक ७, शुक्रबार ०७:४८ गते
समय अचम्मको हुने कुरा जीवन भोग्दै जाने क्रममा सिकिने रहेछ । आफन्तजस्ता पराईहरु र पराईजस्ता आफन्तहरु पनि भोग्यो जिन्दगीले । भित्री हृदयदेखि अरुको अनुहार उज्यालो देख्दा मन प्रफुल्ल बनाउन मानिसहरु यस धरतीमा कति जन्मिन्छन् होला ? दुनियाँ अचम्मको हुन्छ । ९९ कर्म राम्रा गर्नेले एउटा कर्ममा चिप्लियो भने उसका सम्पूर्ण लगानी स्वाहा हुन्छ, अनुभूत तथ्य । ‘व्यक्तिको प्रशंसा’ एक जोखिम कार्य हो । फेरि राम्रो काम गर्ने सद्पात्रलाई समाजले उच्च मूल्याङ्कन गरेन भने भोलि राम्रो काम गर्ने जिम्मा कसले लिने ? ‘माम–काम–दाम–नाम’ जीवनको एक मार्ग भएजस्तो लाग्यो । हामी साधारण मान्छेको नामप्रतिको मोह, जायज मोह हुन्छ नै, हुनुपर्छ । उहाँ राम्रो मान्छे हो भन्ने कुरा कानमा प¥यो भने मान्छे राम्रो हुने अभ्यास गर्दछ । होइन भने नाम न यश खरानी खस् भएमा भित्री मनमा कसैको पनि जाँगर नपलाउने हुनसक्छ । उत्साहित बनाउने काम समाजको हो । राम्रो काम गर्ने मानिस ‘दुर्लभ हीरा’ हो । अहिलेको दुनियाँमा नियत सफा भएको मानिस पाउन धेरै मुस्किल हुन्छ, अनुभूत तथ्य । पूर्णिमा सम्झिएर संगत ग¥यो, औँसी भएर निस्कन्छ मान्छेको जात । मान्छे रहस्यमयी प्राणी हो । आफैँलाई चिन्न मुस्किल हुने दुनियाँमा अरुलाई चिन्छु भन्नु एक भ्रम हो । तर, आफ्नो मन सफा राखेर असल मानिसहरुको संगत गरेमा दीर्घकालमा भ्रमको पर्दा च्यातिन्छ र सुविधाजनक सत्य बाहिरिन्छ ।
जीवनको धेरै हिसाबकिताब मिलाएर यो लक्ष्मीमाताको ‘सौताको सुपुत्र’ पनि साहित्य नामको उपवनमा आयो, रमायो । मेरो पहिलो घर हो, साहित्यिक घर– चितवन साहित्य परिषद् । अब त २५ वर्षभन्दा बढी बिताएजस्तो लाग्छ । अविरलरुपमा यस संस्थामा कार्यसमितिमा नै रहेर साहित्यको सेवा गर्ने मौका पाएँ, यात्रा जारी छ । चितवन साहित्य परिषद्को पर्याय भन्छु म कलाप्रेमी कारसहितका साहित्यकार गुरूदेव केदारनाथ खनाललाई । पिता, गुरू, साथी, सहयात्री, उत्प्रेरक, मेरो त पाठक पनि, मान्छे एक : नाता अनेक । फेरि हाम्रो क्षेत्र साहित्यमात्रै भएन, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि हामी उही जिल्लामा ‘हमपेसामा’ ! सबभन्दा ठूलो कुरा– हाम्रो मन मिल्छ । एउटा प्रमाण यो पनि हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई महान् भनेमा व्यक्ति स्वयम् नै लज्जित हुनसक्छ । व्यक्ति होइन कर्म महान् हो । लेखाइ उत्कृष्ट तर भित्री चरित्र ठीकविपरीत भएर भावकहरुले दिक्क मानेको इतिहास बग्रेल्ती छन् । साधारण मानिस भएर पनि गुरूदेव केदारनाथ खनालको अगुवाइमा असाधारण काम भएको प्रमाण हाम्रो पवित्र मन्दिर चितवन साहित्य परिषद् हो । यो हाम्रो चितवनको ‘आन–वान–शान’ हो । एक वर्ष अस्ट्रेलिया बस्न प¥यो पारिवारिक करले र साहित्यिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाइनँ । सामाजिक सञ्जालमार्फत खबर लिने काम भइरह्यो ।
आत्मीय अनुजद्वय विश्वनाथ खनाल र लक्ष्मण अर्यालबाट मैले ‘केदारनाथ खनाल : व्यक्तिकृति (अमृतोत्सव)बारे थाहा पाएँ । प्राविधिक कारणले मन फुकाएर लेख्न पाइनँ । शैक्षिक पात्रमात्रै नभएर एक साहित्यिक अभियन्ता हुनुहुन्छ गुरूदेव । अब त हाम्रा ‘हिमाल’ व्यक्ति होइन, व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । गोर्खाली खनालहरु मेरो जीवनका लागि ‘वरदान’ भएको कुरा जगजाहेर । भरपर्दो अभिभावक हुनुहुन्छ, ‘केदार बा’ । हामीले धेरै धेरै साहित्यिक यात्रामात्रै गरेनौँ, ठूला–ठूला अनुष्ठानहरु पनि सम्पन्न गरेको कुरा इतिहास साक्षी छ । केदारनाथ गुरूदेव र आदरणीय दाजी श्रीभक्त अच्यूत वाग्लेलाई ‘कल्याणजी+आनन्दजी’ भने फरक पर्दैन । म उहाँहरुको ‘जुनियर किशोर कुमार’ हुँ, मनले सदा किशोर नै रहनेछु । यी साहित्यिक ‘हली’ले धेरै धेरै ‘बहर’ दाएको कुरा हाम्रो सामुन्ने घामझैँ छर्लङ्ग छ । आज चितवन साहित्य परिषद् युवाहरुको काँधमा पुगेको छ । थाकेका र पाकेका पाका पुस्तालाई युवाहरुले उचित सम्मान दिएको कुरा अनुभूत गरेको छु । केदार गुरूको सम्मानमा यो ‘अमृतोत्सव’ सम्पन्न हुनु, उहाँको जन्मदिनको साइत पारेर किताबको लोकार्पण हुनु पनि एउटा गर्वको कुरा हो । मलाई शालिकमा विश्वास छैन । स्मृतिग्रन्थमा विश्वास छैन । नन्दन बा, विनोदी गुरूपछि हामी केदार गुरूसम्म आइपुगेका छौँ । अब चितवनले ‘रामबाबु घिमिरे’ सरको बारेमा पनि केही गर्नेछ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
सम्मान गर्न लायक पात्रलाई उचित सम्मान गर्दा सम्मान गर्नेको पनि सम्मान हुन्छ । ‘सम्मान र पुरस्कार, मन्त्री, नेता, पिएचडी…’ आदि कुराहरुले साख गुमाएको कालखण्ड हो यो । कोरोना भाइरसले यो धरतीलाई ‘डिप्रेसन’मा लैजान लागेको बेलामा कोरोनालाई नै च्यालेन्ज दिएर हामीले यति राम्रो काम गरेका छौँ । केदारनाथ खनाल गुरूदेवलाई सम्मान गर्दा सम्पूर्ण साहित्यप्रेमीहरु सम्मानित भएको कुरा असत्य होइन । गुरूआमा ‘ओमशान्ति’ कलादेवी खनाललाई विशेष बधाई ! सम्पूर्ण खनाल परिवारलाई बधाई ! लक्ष्मी र सरस्वती दुवै दिदीबैनी अनुकूल भएको परिवार मानेको छु मैले । सफल र सार्थक जीवन हो गुरूदेवको । यी ‘उज्याला’ मान्छेको संगतमा आएर मैले कुलगुरू ‘कृपाचार्य’ पाएको अनुभूत गरेको छु । फूलपाती यसरी पो भित्र्याउने ! अमृतमय वातावरणमा यो ‘अमृतोत्सव’ पूर्ण सफल भएको छ । आजको दिन हाम्रो लागि विशिष्ट दिन हो । छन्द सारथि बा रमेश खकुरेलको पनि १६ दिनअघि यसरी नै अनुष्ठान सम्पन्न गरिएको थियो । मेरा ‘मानस पिताश्री’ खनाल गुरूदेवलाई अमृतमय बधाई !